SAFE Banking Act Inopa Kuwanikwa kweBhenji Services for Cannabis Inoshamwaridzana Bhizinesi Nzvimbo
Iyo yepamutemo cannabis bhizinesi parizvino ndeimwe yemabhizimusi akanyanya budiriro muUnited States ine nzvimbo yakakura yekukura. Muna 2017 chete, indasitiri ye mbanje yakanyora inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora mukutengesa, uye kukura kwemusika kunotarisirwa kurova mabhirioni mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri neshanu. Sezvazvino, nyika dzinodarika makumi matatu nematatu dzakanyoresa zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga uyu pakurapa uye nezvekuvaraidza. , Maine, Massachusetts, Nevada, uye Dunhu reColumbia.
Ipo cannabis iri kuwedzera kuva yepamutemo, nyika zhinji dzichiri kuona mushonga uyu zvisiri pamutemo semutemo wehurumende. Saka nekudaro, kutevedza mitemo yenyika kunokosha kana iwe uchida kupinda muindastiri. Vanamuzvinabhizinesi avo vanofunga kumisikidza zviri pamutemo mbanje mbichana bhizinesi rinofanirwa kutevedzera yakaoma, inogara ichiratidzira misi yemutemo we cannabis nemirairo.
Munyaya ino, isu tichaongorora kufunga kwepamutemo kunosanganiswa nekumisa bhizinesi repamutemo zvine chekuita, kusarudza mhando yebhizinesi yekuita, nekuchengetedza zvivakwa uye mabhenji ebasa bhizinesi.
Kusarudza Yakasarudzika Cannabis Bhizinesi
Nyika yega yega ine mitundu yakasarudzika yemarezenisi, pamwe nemirairo nemirau inodzora iyo cannabis indasitiri. Kuti ushandise chero cannabis zvine chekuita nemabhizinesi ari pamutemo, iwe unofanirwa kuchengetedza rezinesi kubva kune yako nyika nzvimbo. Matatu makuru emhando mbichana bhizinesi mapoka aripo; kurima, kutengesa, nekutengesa zvigadzirwa.
Mabhizinesi ane chekuita nekurima mbanje anotariswa zvakanyanya zvichienzaniswa nevavanogarisana navo. Kurimwa kwembanje kunosanganisira kukura, kuomesa, kudhonza, kurapa, uye kurongedza iwo mushonga wekutengeswa kunzvimbo dzinochengeterwa zvinhu kana nzvimbo dzekutengesa. Aya mashandiro anoda huwandu hwakakwira hwehorticultural hunyanzvi uye hombe yekutanga capital.
Bhizinesi rakagadzirwa rakasanganiswa rinosanganisira kuwanikwa kwechero mbanje, salves, uye macheni kubva kunzvimbo dzakatenderwa uye kuvapa kuvarwere nevanozvivaraidza vashandisi. Bhizinesi iri rinosanganisirawo nzira yekubvisa resin kubva pamushonga uye kugadzira chigadzirwa chakatengeswa, mushure mezvo mushambadzi anozotamisa zvigadzirwa mumhando yakarongedzwa muzvitoro zvekutengesa uye kumaresports.
Kutengesa kwevatengesi (inozivikanwawo seanounganidza kana maharavhizari) zvinoreva kuzvitoro zvakasarudzika zvinotarisana nekutengeswa kwezvinhu zvinoenderana nechero cannabis kune vashandisi vane mvumo yekupedzisira. Zvivakwa izvi zvinopa mushonga uyu kubva kumuridzi wedhisheni ane rezinesi kana processor uye inozvipa kuvarwere vanofanirwa uye vatengi. Kumisa rudzi urwu rwebhizinesi kwakaoma uye kunodhura, asi iyo mibairo inobatsira kamwe kana ikatanga kutenderera.
Usati wagadzika bhizinesi ye cannabis, zviri nani kuti usvike kune rimwe gweta rinoshanda mumunda wemba mbanje. Gweta rinotarisana ne cannabis rinokurukura newe zvese zvirevo nemirau uye nekukubatsira kunyorera rezenesi sezvinoenderana nemutemo. Dzimwe nyika dzine hwindo rekuvhura rezenisi uko marezinensi mazhinji anopiwa kamwechete, asi mamwe achitambidza huwandu hwezinesi rezenisi uye zvinoda humbowo hwekugona uye kuwanikwa kwe capital.
Gweta rine cannabis rine marezinesi rinokubatsira kukurumidza kunyorera rezenisi uye kubvumirwa kuitira kuti bhizinesi rako risimuke uye rikurumidze kukurumidza sezvinobvira. Pasina gweta, iwe unosungirwa kukanganisa mune zvinoshandiswa, izvo zvinogona kunonoka kana kukanganisa basa rese. Gweta richakubatsira kuzadzisa zvese zvinodiwa kuti uve nechokwadi chekuti unoramba uchiteerera maererano nezvinodiwa rezinesi rako.
Kuchengetedza Real Estate kune Inosimudzira Cannabis Bhizinesi
Iwe unofanirwa kutsvaga nzvimbo inokwanisika yebhizimusi yako ye-cannabis inotungamirwa iyo inogona kuwanikwa nyore nyore kune ako anotarisirwa vatengi. Zvimwe zvinhu zvinokanganisa nzvimbo yenzvimbo yako zvinosanganisira mari yezvivakwa uye kuva pedyo nezvikoro, machechi uye nzvimbo dzinochengetwa vana.
Kunyangwe kana kusava nechavo chekudya ndicho chinhu chikuru kune hanya kwako, iwe unofanirwawo kutevedzera marongero ako emunharaunda nedunhu pakusarudza nzvimbo yebhizimusi rako rembanje. Mazhinji matanho ekugadza anotsikisa kuti chero bhizimusi rine chekuita ne cannabis rinofanirwa kunge riinosvika zviuru zvitanhatu kubva kure nezvikoro, nzvimbo dzinochengeta vana, uye machechi.
Iwe unogona kuseta kubvunzana nevashandi vemaindastiri maitiro akanyanya paunenge uchichengetedza zvivakwa zvebhizimusi rako re cannabis repamutemo. Iwe unozotungamirwa pamusoro penzira yekusarudza yakakodzera nzvimbo kuitira kuti iwe ugone kuchengeta yako bhizinesi yakaderera sezvinobvira.
Canannis SAFE Banking Act
Kunyangwe inopfuura hafu yeUnited States yakanyoresa uye kudzora kushandiswa kwembanje, mabhangi mazhinji anga achizeza kushandira mabhizinesi ane mvumo muindasitiri iyi nekutya zvirango zvehurumende. Yakaenderera mberi kubhanga yemari yemabhangi yakamanikidza varidzi vemabhizinesi e cannabis kubata zvakanyanya mumari nekuti havakwanisi kuvhura maakaundi ebhengi nemapazi ehurumende.
Neraki, izvi zvinorambidzwa zvave pedyo nekupera nekubvumidzwa kweSAFE Banking Act neCalifornia senate uye Illinois vanogadzira mutemo. Pasi pemutemo, masangano evashandi vezvikwereti nemabhangi akazvimirira anotenderwa kuwana dheti-rebumbiro renyika kuvabatsira kupa mabasa ekuchengetera zviwanikwa kumabhizimusi ehurumende mbanje masangano. Iyo itsva cannabis banking mutemo waizovharira vakuru vehurumende kubva mukuisa zvirango kumabhangi anosarudza kushandira zviri pamutemo zve cannabis zvine chekuita nemabhizinesi (CRBs).
Iyi Yakachengeteka uye Yakakodzera Enforcing (SAFE) Banking Act inotarisira kupa chiteshi chakabudirira uye chakachengeteka kumabhizimusi akachengetedzwa emabhangi anoshanda nemabhizinesi e cannabis. Mutemo, uyo wakawana kupihwa mvumo yeboka rakakura uye rakasiyana revamiriri vemitemo, waizomisa masangano ehurumende kubva mukupa masanction federal kumabhangi anoshanda nemaCRBs kumatunhu uko mbanje zviri pamutemo pasi pemutemo.
SAFE Banking Act, iyo inotsigirwa naEd Perlmutter, Denny Heck, Warren Davidson, naSteve Stivers nerutsigiro rwemabhanga emabhanga, inotsvaga kumisa vabati vemabhanga emubatanidzwa kutyisidzira hurongwa hwebhangi rechinyakare chete nekuti vatengesi vavo ndeve CRB. Inotsvakawo kuchengetedza vashandi vebhengi kubva pachikwereti chekushambadzira kwenyika kana vachishanda nemabhizinesi e cannabis.
Mutemo mutsva uyu unotadzisawo kuyedza kupi nekupi nehurumende kumanikidza vekunze kubhengi kuti vasiye kupa masisitimendi kuCRB, kudzikisira inishuwarenzi yayo yekushandira CRB, kupa chikwereti chakaitwa kuCRB, kana kutora chero chiito chipi zvacho chinofungidzirwa kuti chine rusarura munyika ipo mbanje zviri pamutemo.
Kugadzirwa kwechiteshi ichi chakachengeteka kuchachengetedza mabhangi echinyakare kubva kune chero chimiro chekutsiva kubva kubumbiro remabhangi emubatanidzwa. SAFE Banking Act inobvuma masimba eiyo tsika yekumabhangi ezvemakore kuti ishandise zvizere indasitiri iyi, nekudaro hapana chikonzero chekuti nyika itange mamwe masangano emakambani ekubatira maCRB.
Isu tiri-yakazara-mutemo mutemo kambani yakamiswa muPeoria, Illinois. Ini ndinonzi Attender Thomas Howard. Ini ndine timu yevanoziva, vane tarenda, uye vakazvipira magweta akazvipira anopa ruzivo rwakakwana rwemutemo kune vatengi mune iyo cannabis indasitiri. Pamwe chete nechikwata changu, tinogona kukubatsira kutanga, kuronga, nekuchengetedza bhizinesi rako re cannabis, kuchengetedza marezenisi ehurumende uye mvumo dzemapurisa, tsvaga nzvimbo yakakwana yekuisa bhizinesi rako rembanje, uye kufurira masisitendi ekupa mabhanga ekupa bhizinesi rako rine mari .
Isu tinonzwisisa kuti kumisa bhizinesi rine-cannabis-inoda kunzwisisa kwakadzama kwemirairo yakaoma yezvemitemo inobatanidzwa mune ino chikamu. Masangano emubatanidzwa anotonga kurima, kutora, uye kugovera mbanje zvinochinja. Neichi chikonzero, chinangwa chedu ndechokubatsira vatengesi kuti vatange bhizinesi rinokura muindasitiri yezvekurapa nezvekutandadza.
Isu tinodada nemagavhuna edu ebhizimusi revatambi, vane hunyanzvi hwekuziva nehurumende, nyika uye nemitemo yenzvimbo inotonga urwu bhizinesi. Tinoda kukubatsira kuti urambe uri pamusoro peiyi indasitiri inoenderera-ichishandura nekugara 100% ichienderana nemirairo yose iripo. Isu tine shungu dzekuziva kuti iwe unonzwisisa mutemo wese uyo unoshanda kune chako mamiriro kuti bhizinesi rako ribudirire.
Bata neve Illinois-based magweta edu nhasi kuronga kutaurirana. Isu tiripano kuchengetedza yako budding mbanje bhizinesi matanho ese e nzira.